မရှင်းမလင်း ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ဒေါ်လာငွေလဲ အမိန့်ကိစ္စ အပြည့်အစုံ ရှင်းလင်းချက်နှင့် ဒေါ်လာဈေး သတ်မှတ်လိုက်လို့ ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေနဲ့အတူ ကြီးထွားလာမယ့် မှောင်ခိုဈေးကွက် - CRT News
ကုန်သွယ်စီးပွား ဆောင်းပါး နိုင်ငံရေး0
မနေ့က ဗဟိုဘဏ်ထုတ်ပြန်ချက်ကို နားလည်သလောက်ပြောရရင် အကောင့်ထဲဝင်လာတဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာတွေကို အကောင့်ပိုင်ရှင်က ရောင်းချင်ရောင်း မရောင်း ချင်နေ ဘဏ်ကတစ်ရက်အတွင်း ၁၈၅၀ rate နဲ့ လဲပြီး ဝယ်မှာပါ။ မေးရာရှိတာက တစ်ရက်ကျော်သွားရင်ကောဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲ၊ မရောင်းပဲနေရင်ကော၊ ဖြေစရာရှိတာက တစ်ရက်အတွင်း ဝယ်ပါ့မယ်ဆိုတော့ကာ တစ်ရက်ကို
မကျော်တာပါ။ မရောင်းပဲ မရပါ။ ဒါဆို ရတဲ့ မြန်မာငွေကို ဘယ်လိုပေးမှာလဲ။ ဧပြီ ၁ ရက်နေ့က ထုတ်တဲ့ စာအရ လဲလို့ရတဲ့ မြန်မာငွေကို အကောင့်ဟောင်း ထဲထည့်ပေးပြီး ငွေသားထုတ်ယူလိုပါက ဘဏ်တွင် ငွေသားကျပ်ငွေ ရှိမှုပေါ်မူတည်၍ ထုတ်ပေးပါမည်လို့ရေးထားပါတယ်။ အဲ့တော့ တစ်ပတ်ကို ၅သိန်း သို့ ၁၀သိန်း ထုတ်ရင်လည်း ထုတ်ရပါလိမ့်မည်။ သို့ပေမဲ့ ဘဏ်မှာ ကျပ်ငွေ အများရှိနေပြီလို့
ကျနော်ထင်ပါတယ်။ သွင်းကုန် ကုမ္ပဏီ (Import Company) တွေနဲ့လည်း ချိတ်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် ငွေသားကိုတော့ တစ်ခါတည်း ထုတ်ပေးမယ်လို့မြင်ပါတယ်(ကျနော့ အထင်ပါ)။ သွင်းကုန် (Import Company) တွေကကော ဒေါ်လာကို ဘဏ်ဆီက လိုသလောက်ဝယ်လို့ရမှာလား?
လိုသလောက်ရရင်တော့ အိုကေမှာစိုပြေပေါ့….. မရဖို့တော့များပါတယ်။ ကန့်သတ်ချက်တွေရှိလာပါမယ်။ သွင်းကုန်တွေ ကန့်သတ်လာမှာပါ။ ထုတ်ကုန် (Export Company) ကကော? သူတို့ကတော့ Complain စတက် နေပါပြီ။ ဒေါ်လာအရွက် အရောင်းအဝယ်ကရော၊ မှောင်ခို အရောင်း အဝယ် လုပ်မှပဲရမှာပါ…. မုန်တိုင်းပြီးရင်လေပြေလာမှာလား လေပွေပဲ လာမှာလား စောင့် ကြည့်ရမှာပါ…..ကိုသန်းညိမ်းရေ (Moe Myint Htet)
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ ၄ လလောက်တုန်းက ဗဟိုဘဏ်က ၁၇၈၀ နဲ့သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ အဲတုန်းက money changer တွေက ဗဟိုဘဏ်သတ်မှတ်ဈေးနဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ၁၀၀၀ လောက်ရောင်းပေးတယ်။ နောက်ပိုင်းကျတော့ မရောင်းပေးနိုင်တော့ဘဲ ဗဟိုဘဏ် rate က သက်သက်နဲ့
အပြင်ပေါက်ဈေးက သက်သက်စီတွေဖြစ်ကုန်တာပါဘဲ။ အခုလဲ အစပိုင်းမို့လို့ money changer တွေက ၁၈၅၀ နဲ့ ၁၀၀ လောက် ၂၀၀ လောက်ရောင်းပေးနေတာ နောက်ကျရင် rate က နှစ်မျိုးပြန်ဖြစ်လာမှာမြင်ယောင်သေးတယ်။ အရွက်ဈေးကွက်က ကျနော်အရင် post တုန်းကပြောသလို ရှိကိုဆက်ရှိနေဦးမှာဘဲ။ မဟုတ်ရင် ဒီကနေနိုင်ငံခြားသွားမယ်ဆိုရင် ဒေါ်လာမရှိဘဲဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ဆေးသွားကုမဲ့သူတွေဆိုရင်ရော
ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ယုတ်စွအဆုံး နိုင်ငံခြားသွားဖို့လေယာဉ်လက်မှတ်တောင် ဒေါ်လာနဲ့ ဝယ်နေရတာလေ။ တခြား currency ထက် ဒေါ်လာက အခုထိနိုင်ငံတကာမှာ main currency ဖြစ်နေတော့ ချက်ချင်းကြီးရပ်ဖို့ဆိုတာလည်းသိပ်မလွယ်ဘူးထင်ပါတယ်။
တခုစိုးရိမ်ဖို့ကောင်းတာက နောင်တစ်ချိန်အရွက်တွေရှားလာပြီး အရွက်ဈေးတွေ ကမောက်ကမ မဖြစ်ပါစေနဲ့ဘဲဆုတောင်းရမယ်။
Previous post: (၁၀)တန်း စာမေးပွဲဖြေတာကို စောင့်နေသည့် အမေဖြစ်သူကို ကျောင်းလုံခြုံရေးယူထားသည့် စစ်ကောင်စီ တပ်သားတစ်ဦး၏ သေနတ်မှ ကျည်ထိမှန်
Next post: စီးပွားရေးသမားကြီးတွေ ထည့်နေကျ ဂျင်းနှင့် ဒေါ်လာဈေးကျမယ်ဆိုပြီး ဖွနေတဲ့ လော်ဘီတွေ ( စကစဖိအားကို ကြောက်လို့လား၊ စျေးကွက်ကို အချက်အလက်မှားနဲ့ ဖိန့်လုံးပေးပြီး ကိုယ်ကျိုးအတွက် ကစားကွက်ရွေ့နေတာလား၊ ဗေဒင်မမေးပါနဲ့ ၂ခုလုံး အတိအကျပါပါတယ် )